Amai Joice Mujuru, mutungamiri webato reNPP, uye vachamirira mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition musarudzo
Mutungamiriri webato rinopikisa reNational People’s Party, Amai Joice Mujuru, vanoti bato riri kutonga reZanu PF rauraya hupfumi hwenyika uye bato reMDC-T rawondonga makanzuru emaguta nemaruwa, vachiti vanhu havafaniri kuvhotera mapato maviri aya musarudzo dzegore rino.
Vachitaura pamusangano webato ravo pamusangano waitwa muTafara muHarare East Constituency nhasi, Amai Mujuru vati kanzuru yeHarare yakundikana kuita basa, migwagwa yaparara, vanhu havana mvura uye hapana chinoratidza kuti vari kubhadhara mari yemvura kana yemitero.
Vati makanzura ari muHarare East ndeweMDC-T uye mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly, VaTerrence Mukupe, ndeveZanu PF uye zviri kuitika muHarare East zvinoreva kuti hutungamiriri mukanzuru nemuparamende huri kukundikana kuita basa nemazvo.
Vatiwo vagari vemuHarare East ngavasiyane nemapato maviri aya musarudzo dzegore rino.
Amai Mujuru vatiwo chimwe chikonzero chekusavhotera mapato maviri aya inyaya yekuti mapato aya anoita zvemhirizhonga.
Vati bato ravo harifaririri mhirizhonga inoitwa nemamwe mapato, chikonzero chinoita kuti veruzhinji vafanire kuvhotera bato ravo.
Amai Mujuru vakurudzira vanhu kuti vavhotere madzimai pazvinzvimbo zvese musarudzo vachiti izvi ndizvo zvingasimudzire nyika.
Vachakwikwidza vakamirira NPP musaraudzo dzeNational Assembly muHarare East, VaItai Munyoro vati, zvakakosha kuti vanhu vavhotere vanhu vanogara munzvimbo dzavanogara kwete vauyi.
Vechidiki vebato reNPP vataura pamusangano wanhasi vati vakazvipira kuvhotera Amai Mujuru musarudzo vachiti havana chivimbo nevatungamiriri vemamwe mapato anopikisa.
Harare East dunhu rave nevanhu vakawanda vabuda pachena kuti vanoda kurimiririra uye vanosanganisira, mutungamiri wePDP, VaTendai Biti, avo vachimirira MDC Alliance, VaObert Gutu veMDC-T pamwe nenhengo yeparamende iripo, VaTerrence Mukupe veZanu PF.